MAG Somali – Stay Safe From Mines – MAG
Taariikh colaadeed ayaa dhaxalsiisay miinooyin dhulka lagu aaso iyo bambooyin aan qarxin oo ka dhacay Soomaaliya. Jiritaanka aaladahaan halista ah waxay khatar deg deg ah ku hayaan nolosha dadka waxayna gacan ka geystaan dagaalada ka socda gobolka.
Laga soo bilaabo 1991, dagaal iyo macaluul waxay dileen dad lagu qiyaasay 250,000 oo qof waxayna ku barakaceen saddex milyan oo kale gobolkaan. Amni darrida ayaa horseeday dagaallo daba dheeraaday, taasoo keentay faddarayn baahsan oo bambooyin aan qarxin iyo faafitaanka hubka sharci darrada ah.
MAG (Mines Advisory Group) waa hay’ad caalami oo samafal ah kana shaqeysa miinada iyo walxaha qarxa oo ka howl gasha ila 25 waddan. Meelaha ay saameeyeen iskahorimaadyadu Waxaan ka helnaa oo aan burburinaa miinooyinka dhulka lagu aaso, Gantalaha kooxaha ah iyo bambooyinka aan qarxin . Sanadkan 2021, MAG Somalia waxay wacyi galinta qataraha minooyinka iyo walxaha qarxaka ka bilawday labo gobood oo kala ah; Dayniile-Mogadishu iyo Afgooye waxaana ka faaideyste Wacyi galinta dad kor u dhaafaayo ila 4,300 oo qof oo isugu jira ; Rag,Dumar,iyo caruur yar yar Mudo lix bilood ah.
MAG (Mines Advisory group) waa hay’ad caalami oo samafal ah kana shaqeysa miinada iyo walxaha qarxa oo ka howl gasha ila 25 waddan. Meelaha ay saameeyeen iskahorimaadyadu Waxaan ka helnaa oo aan burburinaa miinooyinka dhulka lagu aaso, Gantalaha kooxaha ah iyo bambooyinka aan qarxin. Sanadkan 2021, MAG Somalia waxay wacyi galinta qataraha minooyinka iyo walxaha qarxaka ka bilawday labo gobood oo kala ah; Dayniile-Mogadishu iyo Afgooye waxaana ka faaideyste Wacyi galinta dad kor u dhaafaayo ila 4,300 oo qof oo isugu jira ; Rag,Dumar,iyo caruur yar yar Mudo lix bilood ah.
Taariikhda colaadeed ee soomaliya ku raagte ayaa dhaxalsiisay miinooyin dhulka lagu aaso iyo bambooyin aan qarxin. Jiritaanka aaladahaan halista ah waxay khatar deg deg ah ku hayaan nolosha dadka waxayna gacan ka geystaan dagaalada ka socda wadanka iyo gobolka.
Laga soo bilaabo 1991, dagaalo iyo macaluulo baán aya sababay dhimashada dad lagu qiyaasay 250,000 oo qof iyo saddex milyan oo kale oo ku barakaceen. Amni darrida ayaa horseeday dagaallo daba dheeraaday, taasoo keentay sameeynta baahsan ee bambooyinka an qarxin iyo faafitaanka hubka sharci darrada ah.
Yaalintaanka bambooyinka an qarxin gudaha gobolka oo dhan waxay horseedey khatar baxad weyn oo an la aqbali Karin. Sannad kasta75 carruur ah aya wadankan ku dhinta ama ku dhawacma. Tiro badan oo somalida kasoo barakacay dagalada iyo maclusha –ila sedax malyan sida ay qiyaaste UNka- aya si gaar ah oogu nugul haliistan.
Intii u dhexeysey 2016 iyo 2018 oo keliya, ku dhowaad 200,000 oo qof oo ku nool Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa ka faa’iideysatey wacyi galinta halista miinoyyinka iyo walxaha qarxa ee ay qabatay hey’ada MAG.
Tan iyo markii la aasaasay heyáda MAG, adduunka oo dhan waxay ka caawisay in ka badan 18 milyan oo qof oo ku kala nool 68 waddan dib u dhiska noloshooda iyo kobcinta dhaqalahooda ka dib isku dhacyada iyo dagaalada.
Mines Advisory Group (MAG) Somali